Nigranee | » निकले प्रियंकालाई करवाचौथको शुभकामना दिँदा किन खिल्ली उडाइयो ? निकले प्रियंकालाई करवाचौथको शुभकामना दिँदा किन खिल्ली उडाइयो ? – Nigranee
निगरानी October 19, 2019 42
काठमाडौं। प्रियंका चोपडा र निक जोनस पछिल्लो समय धेरै चर्चित जोडीमध्येका एक हुन् । प्रियंकाको हालै रिलिज भएको फिल्म ‘द स्काइ इज पिंक’ले बक्स अफिसमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन तर पनि उनीहरु आफ्ना तस्वीरका कारण सामाजिक संजालमा भने निकै चर्चामा रहन्छन् । प्रियंका र निकले यस वर्ष आफ्नो पहिलो करवाचौथ मनाए । तर, करवाचौथको अवसरमा निकले प्रियंकालाई शुभकामना दिएको एउटा ट्वीट भने निकै भाइरल भएको छ । यो ट्वीटलाई लिएर निकको निकै खिल्ली उडाइएको छ ।
निकले आफ्नी पत्नी प्रियंकाको तारिफ गर्दै ट्वीटरमा केही लाइन लेखेका थिए । यही लेखाइका कारण उनको खिल्ली उडाइएको हो । ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले निकको लेखाइ ३ कक्षाका विद्यार्थीले लेखेको निबन्धजस्तो भएको भन्दै खिल्ली उडाइरहेका छन् । निकले लेखेका थिए – ‘मेरी पत्नी भारतीय हुन् । उनी एक हिन्दू हुन् । उनी हरेक कुरामा अतुलनीय छिन् । उनले मलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको बारेमा धेरै सिकाएकी छिन् । म उनलाई धेरै माया गर्छु । तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी साथमा धेरै रमाइलो गर्छौं । सबैलाई करवाचौथको शुभकामना ।’